१ सय ६० सिटको नतिजा आयो,कस्ले कति सिट जिते ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
१ सय ६० सिटको नतिजा आयो,कस्ले कति सिट जिते ?
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार १०:४९ मा प्रकाशित
सेैघाली खबर,मंसिर २६, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमध्ये हालसम्म १६० सिटको नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।
प्राप्त मत परिणामअनुसार नेकपा ९एमाले० ७५, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ले ३६, नेपाली कांग्रेसले २१, राजपा नेपालले ११, संघीय समाजवादी फोरमले १० सिट प्राप्त गरेका छन् ।